News - New Ngwaahịa nke Teflon faiba glaasi akwa
Silicon ntekwasa faiba glaasi Fabric
PTFE faiba glaasi Fabric
Polyurethane ntekwasa faiba glaasi Fabric
Aluminium Foil faiba glaasi Fabric
Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric
Akụkọ Companylọ ọrụ
New Ngwaahịa nke Teflon faiba glaasi akwa
Teflon faiba glaasi akwa aha teflon ntekwasa iko eriri ákwà, makwaara dị ka pụrụ iche (ígwè) fluoron elu okpomọkụ eguzogide ọgwụ agba (ịgbado ọkụ) ákwà, na-kwụsịtụrụ polytetrafluoroethylene (akpọkarị plastic King) emulsion dị ka ngwaọrụ, impregnated na elu-arụmọrụ iko eriri ákwà. elu-arụmọrụ, multi-nzube mejupụtara ihe ọhụrụ ngwaahịa.Be N'ihi nke ya magburu onwe arụmọrụ, ọ na ọtụtụ-eji ụgbọelu, akwụkwọ, nri, gburugburu ebe obibi-echebe, obibi akwụkwọ na dyeing, uwe, chemical ụlọ ọrụ, iko, na nkà mmụta ọgwụ, ngwá electronic, mkpuchi, na-ewu (roofing akpụkpọ ahụ Ọdịdị isi ákwà), egweri wheel iberi, ígwè na ndị ọzọubi.
Njirimara arụmọrụ nke akwa Teflon:
1. ejiri na obere okpomọkụ dị n'etiti -196 ℃ na elu dị elu n'etiti 350 ℃. Na-eguzogide ọgwụ na ịka nká na-arụ ọrụ. arọ naanị belatara site na 0.6% ma ọ bụ otú ahụ; N'ihe banyere -180 ℃ àjà ihe ọ temperatureụ℃ụ dị ala agaghị agbawa, ma jigide nro mbụ.
2. na-enweghị nrapado: ọ dịghị mfe ịgbaso ihe ọ bụla .Easy dị ọcha ụdị mmanụ stains, stains ma ọ bụ mgbakwunye ndị ọzọ agbakwunyere na elu ya; Slurry, resin, mkpuchi, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a ga-ewepụ ihe niile na-adọrọ adọrọ;
3. na-eguzogide ọgwụ corrosion, nwere ike iguzogide ike acid, ike alkali, aqua aqua na ọtụtụ organic solvents corrosion.
4. Obere esemokwu ọnụ (0.05-0.1) bụ nhọrọ kachasị mma maka mmanye onwe onye na-enweghị mmanụ.
5. Inyefe ọkụ ruo 6 ~ 13%.
6.na akwa mkpuchi arụmọrụ (obere dielectric mgbe niile: 2.6, tangent n'okpuru 0.0025), mgbochi ULTRAVIOLET, mgbochi static.
7. ezigbo nkwụsi ike dị elu (elongation ọnụọgụ ihe na-erughị 5,), nnukwu ike.Good n'ibu ihe omuma.
8. Mgbochi ọgwụ na adịghị egbu egbu.Ọ na-eguzogide ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa ọgwụ niile.
9. ọkụ na-agba ọsọ.
1. Anti-osisi lining, gasket, ákwà na ebu eriri; Dị ka ọkpụrụkpụ nke dị iche iche, eji dị iche iche ihicha ígwè ebu belt, nrapado belt, akara belt, wdg
2. eldgbado ọkụ nke ngwaahịa plastik, akwa ịgbado ọkụ maka ịgbado ọkụ na akara; Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, ihe nkiri, akara mpempe akwụkwọ na-ekpo ọkụ.
3. Nnukwu mkpuchi eletriki: ikpuchi ọkụ na isi, spacer, gasket na liner.High frequency copper-clad plate.
4. Heat-eguzogide ọgwụ cladding oyi akwa; laminated mkpụrụ, gwara mmanụ ahu Kechie.
5. Microwave gasket, oven mpempe akwụkwọ na ihicha nri;
6. nrapado belt, nyefee -ebi akwụkwọ na-ekpo ọkụ tablecloth, kapeeti azụ roba n'ịgwọ ebu belt, roba vulcanized ebu belt, abrasive mpempe akwụkwọ na-agwọ ntọhapụ ákwà, wdg
7. Nsogbu-enwe mmetụta ọsọ ọsọ nrapado teepu isi akwa.
8. Architectural membrane ihe: kanopi maka ebe egwuregwu di iche iche, pavilions station, parasols, pavilions, wdg.
9. Ejiri maka mkpuchi anticorrosion nke pipeline dị iche iche petrochemical, nchedo gburugburu ebe obibi desulfurization nke ike osisi n'efu gas, wdg.
10. Mgbanwe compensator, esemokwu ihe, egweri wheel iberi.
11. Anti-static ákwà nwere ike mgbe pụrụ iche nhazi.
Post oge: Ọgọstụ-03-2020
Kpọtụrụ site na
No.8 Tianxiu ST Tiedong RD Beichen DT Tianjin China
Ekwentị / WeChat: +86 18622623855
Okwu mmeghe na ihe ndi ozo
Hot Tianjin Cheng Yang Hot Products nke Silico ...
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. Atụmatụ - Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - Sitemap
Aluminized faiba glaasi Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi, Acryli faiba glaasi Cloth, Pu ntekwasa faiba glaasi Fabric Cloth, Acryli ntekwasa faiba glaasi Fabric, Uwe faiba glaasi,